Khilaaf ka dhashay dhagax dhigaa dekadda degaanka Garacad ee Gobolka Mudug.! – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Aug 1, 2018
Maxamed Nuur Diini waa wasiir ku xigeenka Tamarta iyo Kheyraadka Galmudug , habeen kahor ayuun sheegay in Raiisal wasaare Xasan Cali Kheyre uu tagay Garacad si uu u dhagax dhigo dekada cusub ee halkaasi laga hirgalinayo ayna ku tahay dhabar jab mida Hobyi.
Raiisal wasaare Kheyrema uusan tagin Garacad, qorshuhuna ahaa inuu tago sida ay ii sheegeen ilo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya.
Lama oga sababta uusan u tagin , Balse waxaa shalay gelinkii hore garoowe ka baxay tagayna Garacad madaxweynaha Puntland Cabdi wali Maxamed Cali Gaas , dekacadda Cusub ee Garac ayuna dhagax dhigay.
Hadal uu deegaanka Garacad ka jeediyay Madaxweyne Gaas kahor daqiiqado dhagax dhigga dekada Cusub ayaa waxaa uu ka dhawaajiyay hadal u muuqday mid fariin u ah ra;iisalw asaare Kheyre ee ka baqsaday Garacad.
Xasan Kheyre dhankiis Garowe waa uu kabaxay wuxuuna gaaray Qardho kulamo ayu la qaatay dhaqanka Puntland ee magaaladi ku sugan , madxaweyne xigeenka Puntland Cadi xakiin Cabdullahi Xaaji Cumar Camey ayaana Ra;iisal was are Kheyre wehlinaya.
Madaxweynaha Puntland iyo ra’iisal wasaaraha Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay Garowe waxaana tan iyo shalay halkaasi laga soo warinayaa inuu jiro khilaaf u dhaxeysa labada Masuul kaa oo ka dhashay baaqashada Ra’iisal wasaaraha ee dhagax dhigga dekadda Garacad.
Sidoo kale Siyaasiyiin iyo qaar kamid ah dhaqanka deegaanada Puntland ayaa ka carooday sida ay u dhacday dhagax dhigga dekadda garacad.
Cabdi Faarax Saxciid Juxa wasiirkii hore arimaha gudaha ee xukuumadan ayaa qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada ku dhaliilay Ra’iisal wasaaraha inuusan tagin deegaanka Garacad.
Dad ka dhaw madaxtooyada Puntland iyo xafiiska ra’iisalw asaraha ayaa inoo sheegay in khilaafka labada dhinac uu ku dhawaaday inuu baaqdo kulanka Golaha wasiirada Soomaaliya ee todobaadkan oo Garowe inuu ka dhaco la qorsheynayo
Boosaaso inuu tago Ra;iisalw asaraha ayaa asido kalem lagu wadaa waxaana warar soo baxaya sheegayaan in Cabi wali Gaas uu ka biyo diiday raacistiisa.
Waxaana haatan xubnaha Golaah wasiirada ee ka harauy safarkii Axada ay ku wajahnyihiin Garoowe si ay uga qeybgalaan kulanka todobaadlaha ee wasiirada Soomaaliya oo birito halkaasi ka dhacaya.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo ka qayb galaya 20 Sano Guuradda Puntland.